Đặc điểm các loại cây cảnh phổ biến tại Việt Nam | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Đặc điểm các loại cây cảnh phổ biến tại Việt Nam | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi omncinci, amasebe kunye neziqu zinezigaqa, zinegatsha ngokuthe tye. Ixolo elingwevu-mhlophe elinamaqhuqhuva amaninzi, amasebe anameva, amagqabi adityanisiweyo anentsiba anamagqabi angaphezulu angama-9-11, amagqatyana ajikelezileyo, aluhlaza. Umthi ukhula kakuhle kakhulu kwaye udinga ukuthenwa ngokuqhubekayo ukugcina ukumila kwawo, kuphela de umhlaba womile. Nika ingqalelo xa usonga ucingo kwixolo, khangela rhoqo ukususa ucingo ukuphepha ukudala amanqaku kwisiqu, ukuba udlala iingcambu xa ufaka i-repotting, kufuneka uphakamise iingcambu, wenze iingcambu ezidadayo zomthi.
Can Thang Tree
Umthi omncinci, ukhonkotha ngwevu xa ukhulile. Amagqabi amile okweqanda amancinci, atsolo-mfutshane, imida erhabaxa, umphezulu oluhlaza orhabaxa kancinane, umphezulu oluhlaza osezantsi okhanyayo. Umthi ukhula kakuhle kakhulu kwaye udinga ukuthenwa ngokuqhubekayo ukugcina ukumila kwawo, kuphela de umhlaba womile. Nika ingqalelo xa usonga ucingo kwixolo, khangela rhoqo ukususa ucingo ukuphepha ukudala amanqaku kwisiqu, ukuba udlala iingcambu xa ufaka i-repotting, kufuneka uphakamise iingcambu, wenze iingcambu ezidadayo zomthi.
1 3. Isanda
2 4. Umthi weBhanyan omtyibilizi
3 5. Umthi wePolygonal
4 7. Iiglavu Umthi
5 8. Intyatyambo Yephepha
6 9. Umthi weziqhamo zeenkwenkwezi
7 10. Imithi yeCitrus
8 11. Umthi Weenkumbi zeSesame
9 12. Umthi wePlum ubonisa amanzi
10 13. Umthi weTamarind
11 14. Umthi weMulberry
12 15. Umthi oluhlaza weholly
13 17. Umthi weKhokhonathi (Isiqhamo esincinci)
14 18. Umthi womkhiwane
15 19. Umthi wePorcelain waseThai
16 20. Umthi we-Arhat Pine
17 21. I-Conifer – iCypress – iNgwenya
18 22. Umthi wepayina – Umthi wepayina – umtsalane
19 23. I-Horoscope – I-Horoscope ye-Vessel
20 24. Isityalo seHerringbone-Spawn
Izihlahla, isiqu esirhabaxa esinamathumba amaninzi. Amaxolo angwevu-mhlophe angqindilili anelatex kunye nemicu eyomeleleyo. Amasebe amaninzi, amade, arhabaxa. Amagqabi anamaphiko alula, ubude be-ovali, umgca o-wavy kunye neencam ezinqamlezileyo, umphezulu wamagqabi arhabaxa, imithambo ephakame kumphezulu ongezantsi, amagqabi amatsha aluhlaza, amagqabi amadala aluhlaza mnyama. Umthi othambileyo, othambileyo. Musa ukuthena okanye ukugalela kwakhona ebusika. Musa ukushiya isityalo kwindawo enelanga, amaqabunga aya kuba mancinci kwaye ajike aphuzi-luhlaza. Nkcenkceshela rhoqo ukuthintela ukuba umhlaba ungomi.
4. Umthi weBhanyan omtyibilizi
Umthi weBanyan oMtyibilizi
5. Umthi wePolygonal
Umthi omkhulu onamasebe amaninzi kunye neengcambu. Amasebe amade, amaxolo angwevu-brown, latex. Amagqabi anephiko elinye, imilo embhoxo eguqulweyo, isiseko esisingqukuva esisangqa, esishinyeneyo esimenyezelayo, aluhlaza, amagqabi amafutshane.
Khusela xa ujija, xa ubonisa izityalo zangaphakathi, kufuneka ukhethe indawo ekhanyayo, ungadibanisa amatye, unqumle amagatsha amakhulu ukugcina imilo.
Umthi omkhulu, onamasebe amaninzi, amasebe amancinci aneenwele ezintle ezityheli. Amagqabi alula, a-oval-shaped, incam kwisiseko seqabunga i-tapered, i-petiole ifutshane. Amagqabi aluhlaza amhlophe, anoboya obukhulu, ahamba namagqabi aneenwele ezityheli.
Khusela ixolo xa ujija, ungawuvezi umthi ekukhanyeni kwelanga. Xa utyala, kuyimfuneko ukugcwalisa umhlaba ukudala induli okokuqala ukuba ube neengcambu ezintle. Kunokwenzeka ukuhlanganisa amatye afakwe emanzini kwizityalo.
Umthi omncinci okanye i-shrub, i-trunk ene-latex, i-bark yellow-gray. Amagqabi alula afana nomkhonto, i-petioles emfutshane, enye. Iziqu zityheli-ngwevu, zingwevu ezimnyama kunye nexolo eligudileyo okanye elicandekileyo, iintyatyambo ezipinki okanye ezibomvu.
Musa ukuvumela umhlaba ukuba wome, musa ukuvumela isityalo sihlale elangeni ixesha elide kakhulu ehlotyeni, uthintele spider mites ezibomvu, isifo seentsini. Thena amasebe rhoqo ukwenza i-canopy yokwemba, ukukha amagqabi kunye nokulawula ukukhula kweentyatyambo.
7. Iiglavu Umthi
Umthi onyukayo onexolo elingwevu elimnyama elinamadlala amhlophe kwixolo. Amasebe maninzi, amasebe amancinci angwevu namhlophe. Amagqabi adityanisiweyo, aquka izibini ezi-2 zamaphecana, amaphecana achaseneyo, amaphecana aluhlaza, alula ngaphantsi. I-petioles zinde, kwisiseko se-stalk kukho ii-spines ezi-2 ezibamba i-stalk. Isityalo siyakhuphuka, kodwa amasebe anqabile kwaye anameva xa egoba, kufuneka kuthathelwe ingqalelo, musa ukubeka isityalo elangeni, amanzi rhoqo, ukukhusela amaqabunga ebusika.
Umthi weeglavu zokulila
8. Intyatyambo Yephepha
Umthi onyukayo onamasebe amaninzi. Amagqabi akhula ngokutshintshana. Amagqabi a-oval okanye oblong, amaqabunga aluhlaza, i-petioles ene-curved spines, iintyatyambo zinemibala emininzi. Musa ukuthena iingcambu kakhulu, yenze xa uphinda ufaka okanye emva kokutyatyamba. Ukuthena ukudala i-canopy, amahlumela amancinci kufuneka aqatshelwe ngenxa yokuba iintyatyambo ziyaqhakaza phezulu kumasebe. Nkcenkceshela ngokuqhubekayo xa isityalo sidubula, emva koko de umhlaba wome kwaye uqhubeke nokuchumisa xa isityalo siza kudubula.
Umthi omncinci, isiqu sinemiphetho, ixolo elimnyama elingwevu, isiqu somthi esidala sirhabaxa. Amagqabi amaninzi, amagqabi awodwa. Amagqabi amatsha amatsha amfusa-bomvu. Amasebe e-Starfruit anobuqhophololo xa egoba kwaye ejija ngononophelo. Musa ukuthena xa isityalo sidubula, nkcenkceshela rhoqo, ungasishiyi isityalo elangeni ukuze wenze amagqabi abe mancinci kwaye atyheli. Emva kokuba isiqhamo siphelile, isichumisi kufuneka sifakwe ngokukhawuleza.
10. Imithi yeCitrus
Umthi weCitrus ngumthi omncinci, onamatyholo ubude obuyi-1-3 m ukuphakama, isebe elisezantsi, kunye nezikhonkwane ezibukhali ezijonge phezulu. Amagqabi adityaniswe namagqabi ama-3 ongezelelweyo. I-Inflorescences ene-1-3 pcs, ikhula kwi-axils yamagqabi, emhlophe. Isiqhamo singqukuva, sibomvu, siyatyiwa kwaye simuncu. Ngumthi weBonsai okhula kancinci kakhulu.
Umthi weMandarin uyathambile kwaye uyathenwa ukwenza i-Ornamental kunye neBonsai entle. Ingatyalwa egadini enemithi emikhulu. Ngemithi emincinci inokwenza ibhonsai entle kakhulu kuba inophawu lokukhula kancinci. imithi, ukudala iimilo ezininzi ezahlukeneyo kunye nokumisa. Ungatyala iiminiatures, imithi yebhonsai ewola amatye.
11. Umthi Weenkumbi zeSesame
I-Shrub, isiqu esinezikhonkwane ezijonge phezulu, amagqabi aluhlaza bumnyama ahlanganiswe, i-oval e-oval kwincam. Ivumba elimnandi xa lityunyuziwe. Iintyatyambo ezimhlophe ezinuka kamnandi zodwa kwaye zidityaniswe kwii-axils zamagqabi. Iziqhamo ezijikelezayo ngeminwe, zibomvu. Amagqabi aluhlaza unyaka wonke.
Nciphisa ukuthena xa umthi uvelisa iziqhamo, kwaye uchume xa umthi unamathupha neentyatyambo. Nkcenkceshela xa ubona umhlaba oyimbiza ucutheka
Umthi omkhulu, isiqu esirhabaxa, umthi othambileyo, ixolo elingwevu elimnyama. Amasebe amaninzi anamasebe, aqinileyo, agobileyo. Amagqabi awodwa, ajikelezileyo kwiingcebiso zamasebe, amagqabi a-ovate, amancinci, amfusa, aluhlaza endala.
Xa umthi unqabile, kuyimfuneko ukunciphisa impembelelo kwiingcambu, sebenzisa isichumisi ukuze uvule ngokukhawuleza ama-buds. Ungabeka umkhenkce kwingcambu uze ubeke amanzi kuyo ukuze ufunxe.
12. Umthi wePlum ubonisa amanzi
Umthi omncinci, isiqu esirhabaxa. Ixolo elinamasebe amaninzi, elingwevu elimnyama elinamaqhuqhuva atyheli-mhlophe. Amagqabi mancinci, amile okweqanda, ajongene nohlaza olumnyama kufutshane kodwa angenasiqu. Iintyatyambo zimhlophe, zidibene, zineziqu ezinde ezijingayo. I-Plum mat sisityalo esithanda ukufuma, ngoko ke musa ukuvumela umhlaba osebhodweni wome, beka isityalo kwindawo enelanga, musa ukuthena xa isityalo sidubula. Ukugcina iqokobhe xa ujija intambo, uMntla unokufaka iiapilkosi zamanzi kwintambo yeskwidi ukuze zibe namandla aphezulu.
Umthi wePlum uveza amanzi
13. Umthi weTamarind
Umthi omncinci ohlala uluhlaza, bumnyama obungwevu obungqindilili amaxolo arhabaxa, athambileyo najingayo amasebe. Amagqabi anentsiba ehlangeneyo, amaphecana amancinci, amade angumbhoxo, amagqabi aphantse ukucutheka, amaphecana achaseneyo. Ixolo elithambileyo lifuna ukusebenzisa iintambo ezithambileyo xa uqinisa kwaye ujija, ukubeka umthi kwindawo enelanga kangangeentsuku ezininzi kuya kubangela ukuba amagqabi ajike abe tyheli kwaye awe. Nkcenkceshela rhoqo. Ukuba unezityalo zangaphakathi ezingaphantsi kwenyanga enye, khetha indawo enokukhanya okufanelekileyo njengasefestileni.
14. Umthi weMulberry
Umthi omncinci onjengesihlahla, ixolo elingwevu-mhlophe, amasebe agobileyo. Amagqabi adityanisiweyo anepere ezi-2 ukuya kwezi-3 zamagqabi, amaphecana arhangqwe emazantsi, atsolo, aluhlaza omenyezelayo kwaye agudileyo. Izityalo ezifana nokufuma kunye nokuphola, ukunkcenkceshelwa rhoqo kwamagqabi, amasebe aphukayo xa ujiko kufuneka alumke, ukuthintela iimbola, ukophula iingcambu. Ukuze ube neentyantyambo xa usika, kufuneka ubeke ingqalelo ngenxa yokuba iintyatyambo zihlala zifika phezulu kumasebe, ukuba i-canopy ijikeleze xa kuthenwa, kufuneka ulungise “ukurhoxisa” yonke i-canopy.
15. Umthi oluhlaza weholly
Isityalo se-Herbaceous, iziqu ezincinci ze-branched, amasebe amaninzi, i-bark rough. Amagqabi aphikisanayo, i-oblong kwi-tip, encinci kwisiseko, i-petioles emfutshane, amaqabunga aluhlaza acwebezelayo. Kukho ama-spines ama-3 amancinci phezulu kwamagqabi, indawo ephantsi yamagqabi ilula, iintyatyambo zi-spiky, iintyatyambo zimhlophe ezincinci.
Nika ingqalelo xa uthena amasebe kuba iintyatyambo zihlala zikhula phezulu kumasebe, amasebe adla ngokufa xa kungekho sichumiso, okanye ome kakhulu. Musa ukuwuyeka umhlaba wome okanye ube manzi kakhulu, manzisa rhoqo. Izityalo akufanele zibekwe elangeni.
Umthi oluhlaza weholly
Umthi omthi, kwisiqu, amasebe anemiqolo. Iingcambu zikhula ngamandla, kunye neengcambu ezininzi zegesi, i-trunk ene-latex, amasebe aguquguqukayo, i-white-gray bark. Amagqabi mancinci, aluhlaza, amhlophe ngaphantsi, isiqhamo esiluthubi esivuthiweyo (Umfanekiso 1.16). Njengesityalo esithanda amanzi, musa ukuvumela isityalo somile, kufuneka sisuse iikhoyili kuba umthi ukhula ngokukhawuleza. Roll iingcambu zomoya ukwenza isiqu sibe sikhulu okanye wenze amasebe abe makhulu. Ukuthintela izifo zamagqabi njenge thrips, silkworms…
17. Umthi weKhokhonathi (Isiqhamo esincinci)
Umthi ukhula olomeleleyo, iingcambu zomoya, kwaye uvelisa ezininzi. Umthi omncinci, onamasebe, amaninzi, amaplanga athambileyo, kunye nelatex eninzi. Ixolo, umzimba urhabaxa, amasebe amancinci anombala wamaphiko kunye namaphela. Amagqabi alula, a-oblong, agxininisekile, aneziqu ezimfutshane kwisiseko, eziluhlaza, ezimnyama, ezicwebezelayo. Iingcambu ezongezelelweyo zininzi kwaye zikhula kakhulu, ngexesha leemvula. Londoloza amaxolo xa ujija, umthi uziva unovelwano kakhulu kutshintsho olukhawulezileyo lokufuma kunye namaqondo obushushu, nto leyo enokubangela ukuba onke amagqabi awe. Thatha inzuzo yeengcambu ezongezelelweyo ukwenza imilo engaphezulu.
Umthi weKhokhonathi (isiqhamo esincinci)
18. Umthi womkhiwane
Umthi womkhiwane wokuhombisa
19. Umthi wePorcelain waseThai
Umthi okhuni, onamasebe amaninzi, kunye neengcambu eziphumayo, iingcambu ezidadayo. Amaxolo atyheli-ngwevu, angwevu-mhlophe, anelatex. Amagqabi anephiko elinye, aluhlaza okhanyayo, athambile kwaye akhazimlayo, anamaqhakuva amancinci.
Londoloza ixolo xa lijija, musa ukuphinda ulibethe, uthena amagqabi kunye namasebe xa umthi uvelisa iziqhamo ezitsha. Faka isichumiso emva komthi ngamnye ovelisa iziqhamo, rhoqo emva kweenyanga ezine ukusuka entlakohlaza ukuya ekwindla.
Isityalo esifana nentlango, esinesiqu esifutshane, sinesebe elide, kunye ne-latex emhlophe kunye ne-grey-green bark. Amagqabi agxininiswe kwincam yesebe, egudileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka, isiseko sifakwe kwi-stem, i-tip yandiswa phantse ngeenxa zonke. Iintyatyambo zibomvu, iintyatyambo zidibanisa kwi-funnel. Iingcambu zikhula zomelele, zityebe, zigoqeke zibe mhlophe okanye zibe luhlaza.
Amanzi kuphela xa umhlaba ebhodweni womile, ufumile ngokwaneleyo, musa ukunkcenkceshela iintyatyambo. Khusela ityala xa ujija. Jonga iingcambu kuba zihlala zibola xa umhlaba ugutyungelwe okanye ugalelwe amanzi. Musa ukuthena xa iza kutyatyamba. Ukuba i-cuttings kufuneka ihambe i-1 iveki emthunzini ukuze yomise i-sap, ngoko ukusika.
Umthi wePorcelain waseThai
20. Umthi we-Arhat Pine
Umthi weArhat Tung
21. I-Conifer – iCypress – iNgwenya
Umthi omncinci, othambileyo, onamasebe anqamlezayo. Amagxolo amnyama amnyama, alula ukuqhekeka, amaqabunga amade, abhekiselele kwincam yomkhonto, i-midrib icacile, amaqabunga aluhlaza, angabikho.
I-Tung ivakalelwa kakhulu kwizichumisi zemichiza, ayiwutshintshi umhlaba, i-repot xa kukho amathupha amaninzi amatsha ngaphandle, umthi ugcwele amanzi, ulahlekelwa lula ngamagqabi awo, ukuthenwa rhoqo ukugcina umthi umile ngexesha lemvula.
Umthi, ixolo elibomvu elikhanyayo, amasebe angqukuva okanye asisikwere. Amagqabi amancinci amile njengenaliti, iincam zitsolo zinongundo oluhlaza. Xa indala, isikali sibumba kufutshane nombindi womva wegqabi sineedlala ezimbhoxo ezikhula kufutshane necala elichaseneyo, zilungelelaniswe ngokuxineneyo. Umthi umile kakuhle, uthanda imozulu epholileyo.
Izityalo akufanele ziboniswe kwindawo enelanga, ungavumeli umhlaba owomileyo, utshise rhoqo amahlamvu. Thintela ukonakala kwentwala emhlophe kwicanopy, isifo esomileyo samasebe.
Umthi weConiferous-Cypress-Crouching Conifer
22. Umthi wepayina – Umthi wepayina – umtsalane
Imithi ye-Coniferous-iinqaba zePine-iipine ezinomtsalane
23. I-Horoscope – I-Horoscope ye-Vessel
Umthi omncinci, i-gray bark emnyama okanye amaphiko e-cockroach, amasebe amaninzi ajikelezayo okanye isikwere, amasebe akhula ngokuthe tye. Amagqabi amatsha amile okwenaliti, anencam eluhlaza etsolo. Xa sele ekhulile, amaxolo abumbana. Umthi unesakhiwo esihle senqaba, i-canopy ithotywe kancinci.
Musa ukusebenzisa isikere ukusika amahlumela amancinci, tyala imithi kwiimbiza ezinzulu. Xa ugoba amasebe, sebenzisa ucingo oluthambileyo, amasebe anqabileyo, ubeke ingqalelo xa ugoba amasebe.
Umthi omncinci, onamasebe amaninzi, amasebe amancinci aneencam ezi-4, agudileyo angwevu-mhlophe. Amagqabi alula, asondele ngokuchaseneyo, imilo ye-oval eguqulweyo, eluhlaza kunye nombala omfusa, imiphetho eshwabeneyo. Amasebe amancinci amancinci. I-Inflorescences spike kwiincam zamasebe.
Isityalo sithanda imozulu epholileyo enomswakama, thintela ukubeka isityalo kwindawo enelanga, ungavumeli umhlaba ebhodweni wome. Musa ukusika amagatsha aphezulu entwasahlobo, khusela amaqabunga ebusika.
IHoroscope – iHoroscope yenqanawa
24. Isityalo seHerringbone-Spawn
Lo mthi unesiqu esihle kwaye kulula ukuphila, ngoko udla ngokusetyenziswa njengomthi.
Umthi omncinci, onamagatsha amaninzi, ixolo elimhlophe elibunjiweyo, elomileyo, elifileyo, lidala inkangeleko endala. Amagqabi adibeneyo, amaqabunga aphikisanayo, elinye iphepha linamaqabunga ama-3, i-petiole ephezulu ine-petiole ende.
Khusela iqokobhe xa usonga ucingo, amasebe anqabileyo kufuneka alumke xa egoba. Khusela imithi ebusika, ngakumbi kwiindawo ezininzi apho iqabaka ilula ukuyisusa. Imithi ibonakala yomile kwaye yomelele, kodwa ixotyulwe, ihlutshiwe, kwaye yenza amathumba akhupha ngokukhawuleza inyama.
Umthombo: Incwadi yesikhokelo yolimo lwebhonsai – uMphathiswa wezoLimo noPhuhliso lwasemaPhandleni